Mpikirakira sy mpamatsy angovo Magnetika - Orinasa manamboatra andriamby i Shina
Mora ny mametraka sy mamerina ilay mpamaky Magnetika amin'ny zavatra ferrous miaraka amina famoretana ON / OFF. Tsy misy herinaratra fanampiny na herinaratra hafa ilaina hitondrana an'io fitaovana manetazy io.
Mpanangom-bokatra Magnetika maharitra azo entina mankany amin'ny takelaka metaly fandefasana
Ny Magnetic Handlifter maharitra dia nijery manokana ny fampiasana takelaka metaly transshipping amin'ny famokarana atrikasa, indrindra ny ravina manify ary koa ny faritra maranitra na menaka. Ny rafitra magnetika maharitra dia afaka manolotra fahafaha-miakatra 50KG manana 300KG Max misintona hery.
Ny Magnet Ladder Yellow Pilot dia novolavolaina mba hahatonga ny fiainana ho azo antoka kokoa ho an'ny mpanamory fiaramanidina amin'ny alàlan'ny fanomezana teboka vatofantsika azo esorina amin'ireo tohatra eo anilan'ny sambo.
Ity mpanintona andriamby ity dia afaka misambotra vy / vy na akora vy ao anaty rano, amin'ny vovoka na eo amin'ny voa sy / na granules, toy ny fisarihana akora vy amin'ny fandroana elektrôlika, fanasarahana ireo vovoka vy, vy vy ary firaka vy amin'ireo lovia.
Ny mpamono herinaratra boribory dia natao hanintonana ireo faritra vy amin'ny fitaovana hafa. Mora ny mampifandray ny faritra vy ny ambany, ary avy eo sintony ny tahony haka ny faritra vy.
Ity fisamborana magnetika mahitsizoro ity dia afaka manintona sombin-vy sy vy toy ny visy, visy, fantsika, vy vy na vy sy vy misaraka amin'ny zavatra hafa.